आत्मीयता घट्दो समाज | Jwala Sandesh
| प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ ३०, २०७६ ::: 141 पटक पढिएको |
कृपा भण्डारी – मानव जीवन अजम्बरी छैन। एक दिन त सबैले यो संसार छाडेर माटोमा विलिन हुनु नै छ। तर पनि कहिल्यै मरिँदैन जस्तो गरी रिस, राग, घमण्ड र आरिसमा आफ्नो जीवन सिध्याइरहेका छन्। हो, हिजोका दिनजस्तो आज छैन। समयसँगै धेरै विषय बदलिरहेका छन्। हिजोका दिन जीवन जिउने कला, जीवन निर्वाहका लागि गर्नुपरेका दुःख सबै परिमार्जन भएका छन्। नकारात्मक विषयमा पनि परिवर्तन आएको छ।
हजुरआमाहरूले जुन जीवन जिउनुभयो, त्यो आमाहरूले जिउनुभएन। त्यस्तै जुन जीवन हामी जिइरहेका छौं, त्यो अबका पुस्ताले जिउँदैन। यसमा कुनै शंका छैन। तर, घोत्लिएर विचार गर्नुस् त, हिजोजस्तै मानिसबीच आत्मीयता र सरसहयोग छ त ? तपाईंलाई लाग्दैन कि एउटा झुण्डमा रहेर पनि एक्लो बन्दै गएको छ मानिस। बा, हजुरबाका पालाको गाउँले समाज अनि त्यसबीचको आत्मीयता अहिले कतै छ त ?
सूक्ष्मरूपमा हेर्र्ने हो भने, यो सबको कारण हाम्रो समाज, समाजमा बस्ने मानिस र उनीहरूका व्यवहार पनि एउटा जिम्मेवार पक्ष हो। यसबारेमा सोच्ने कसलाई फुर्सद र यहाँ ? जसले मानव जीवन समाप्त पार्न भूमिका खेलिरहेको छ। मान्छे मर्दा पनि समवेदनाले छुन छाडिसक्यो हिजोआज मानिसलाई। समवेदनाका दुई शब्द फेसबुकमा लेखिदिएर आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा भएजस्तो ठान्छ मान्छे। सशरीर उपस्थित भएर दिइने ढाडस र माया अब बिरानोजस्तै हुन थालेका छन्। एउटा जीवन मरेर जाँदा उसको जीवन मात्रै मर्दैन। त्यो जीवनसँग धेरै जीवन बर्बाद हुन्छन्। आ िश्रत परिवारको आधार टुट्छ। छोराछोरीको सपना तुहिन्छ। जीवनसाथीको अधुरो साथ अनि बुढेसकालको लौरो भाँचिन्छ। यो सबै विनाशको कारक बदलिँदै गएको नेपाली समाज र समाजभित्रको घट्दो आत्मीयता हो। Annapurnapost.